Funga Mukati meBhokisi neiyo Entrata Kushambadzira Suite | Martech Zone
Svondo, Kukadzi 7, 2016 China, Gumiguru 1, 2020 Douglas Karr
Vanhu vekuAmerican vari kuwedzera kusarudza dzimba dzekurendesa sezvo huwandu hwevakaroora vane vana hunodzikira zvakanyanya uye maMillenials anosarudza kuve ma renters ekufamba, kunyaradza, uye zvikonzero zvemari.
Nezve kukwidziridzwa mumireniyamu kuzadza musika wekurenda, hazvishamise kuti ongororo dzichangobva kuitika dzakawana izvo 74 muzana yevanotarisira kuroja dzimba vari kutora internet vachishandisa nharembozha pakutsvaga kwavo kweimba. Kutumira kune internet zvinyorwa zvinyorwa, nharembozha webhusaiti, zvemagariro midhiya, uye mukurumbira manejimendi ari pamusoro epfungwa kune maneja maneja. Nekudaro, iyo inogara ichichinja mitengo yemafurati, kuwanda kwenzvimbo dzekugara kune vezvenhau uye nzvimbo dzekudzokorora, uye zviuru zveinternet zvinyorwa zvesaiti zvakaita kuti rive basa risingakwanisike kune mamaneja kuchengeta.
Entrata's Kushambadzira Suite
Entrata's Kushambadzira Suite ndeye yakazara, yegore-yakavakirwa kushambadzira mhinduro inobatsira iyo indasitiri indasitiri kutora kutonga kwavo mitengo, mukurumbira, uye kutumira zvese vachiri kutyaira yakawanda traffic kune avo epfuma mawebhusaiti.
Kufunga Mukati meBhokisi
Mamaneja epfuma anogona kuwana zvese maficha uye masevhisi avanoda kushambadzira yavo zvivakwa mukati mechikamu cheiyo Entrata chikuva. Ivo havachadiwe kuve nehunyanzvi kana funga kunze kwebhokisi yezvavanoda zvekushambadzira nekuti chikuva chedu chinovaitira zvese. Heano zvipo.
Prospect Portal Ⓡ - Mawebhusaiti anoita Kusimudza Kwakanyanya
ProspectPortalⓇ ndiyo inoteerera zvachose mhinduro webhusaiti iyo inobvumidza nharaunda furati kuratidza yavo irimo inorenda zvinyorwa mune chaiyo-nguva pawebhusaiti yavo. Iyo CMS inobvumidza iyo chivakwa kuchinjisa kunze mapikicha, kuisa SEO keywords, kuwedzera zvinyorwa zvitsva uye chinja kune itsva webhu dhizaini nekungoita mashoma mashoma muEntrata dhibhodhi. Uye zvakare, edu masosi anosanganisira anotungamira ekugadzira maturusi (kadhi revashanyi kusanganisa, ratings uye ongororo, online leasing sarudzo, uye mhenyu chat) kubatsira kushandura webhusaiti traffic kuva chaiwo anotungamira.
Tinogona kuyera kubudirira kwemhando ipi neipi yemakambani ekushambadzira ayo isu atinomhanya, kungave kuri kwekutsvagisa injini, kubhadhara pakuki yega kana kunyangwe mushandirapamwe wekhadhi. Kubva pawebhu traffic, nhamba yemakadhi evashanyi uye mitengo yekutendeuka, chikuva chinotitaurira zvese zvatinoda kuti tizive. Meghan Hill, Guardian Real Estate, 150 zvivakwa uchishandisa Prospect Portal
ILS Portal™ - Kuchengetedza Nguva, Kuderedza Kupinda kweData
Iyo ILS Portal chidimbu cheiyo Entrata dashibhodhi inodzora ese epamhepo kushambadzira pamhepo ne otomatiki feeds kune ese makuru internet zvinyorwa zvinyorwa. Iyo inobvisa ipapo ipapo maunitsi akabhadharwa uye inogadziridza ese masaiti nechero shanduko dzinoitwa pamitengo uye mamwe mamiriro ezvinhu euniti.
Isu takabudirira kwazvo pakuwana zvese zvatatumira paCraigslist uye nekugara pamusoro pemhedzisiro yekutsvaga. Kutumira chaiko kuCraigslist isina chishandiso kwainetsa uye kuchidya nguva, saka zvainge zvakaomera maneja vedu vezvivakwa kutumira nguva zhinji sekukumbira kwedu. Zvino, isu tiri kuwedzera traffic mukati mezvivakwa zvese kubva kuCraigslist nekuda kwayo. Amber Ammons, Kushambadzira uye Kudzidzisa Director, Fore Property Kambani
Entrata Mutengo™ - Kurudyi Mutengo, Kurudyi Unit, Right Nguva
Chikamu cheMutengo weEntrata weiyo Entrata dashibhodhi rinotarisa hupenyu hwese hwemaroja uye inokwikwidza nzvimbo yekufungidzira kuongororwa kwakanyatsojeka kwemitengo shiviriro yenharaunda yemafurati. Mamaneja epafurati anokwanisa kuona iyo data yemitengo mune inoenderana interface nema graphs ari nyore kuverenga uye machati e-e-kutarira kunzwisiswa kwekuti nei uye sei mitengo iri kufamba.
MukurumbiraAdvisor™ - Kusarudza Zvinodiwa Nevagari
ReputationAdvisor inounganidza zvivakwa 'wongororo kubva padhuze newebhu mune imwechete interface pane iyo Entrata dhibhodhi iyo zvakare inosanganisira yakazara yemagariro midhiya uye ongorora zvemukati manejimendi sisitimu. Iyo yekuburitsa sisitimu inobatsira iyo chivakwa kuyera mashandiro nekufamba kwenguva, ichijekesa iyo masimba 'masimba uye kushaya simba.
Entrata nguva pfupi yadarika akaunganidza dhata pamaonero uye kukosheswa kwekutarisiswa uye vezvenhau vevanopfuura zviuru zviviri zvevagari vemo.
Dzvanya pano kuti uverenge chidzidzo chakazara
SEO Services - Kuwedzera Kuonekwa, Kuwedzera Trafiki
Isu tinopa vatengi vedu nezvose onpage uye off-peji SEO mazano kuwedzera kuoneka uye traffic kune yavo webhusaiti. Uye zvakare, timu yedu inopa akasiyana online mukurumbira manejimendi manejimendi ayo anosanganisira zvese kubva mukugadzira zvepakutanga zvemukati kuti ubatanidze iyo yezvivakwa peji ine anozivikanwa midhiya masaiti.
MutungamiriManager - Hapana Mutungamiriri Akasiyiwa
LeadManager inosanganisa zvese zvivakwa zvevashanyi kadhi kadhi mune iyo Entrata dashibhodhi. Iyo inounganidza uye kuronga zvese zvezvivakwa zvinotungamira masosi kungave kufamba-mukati, kufona, kana kubvunza pamhepo kupa nyore kutevedzera uye kuteedzera kwematsamba nemitobvu. Nevese vanotungamira traffic uye nekuzivisa kwakatorwa mune imwe nzvimbo, zvivakwa zvinokwanisa kubata zvakawanda zvinotungamira, enzanisa mhedzisiro, uye nekuita sarudzo dzakangwara pane kwaungashandisa kushambadzira madhora.
Tags: maroja efuratientrataentrata kushambadzira suitehadzovatungamiririmanejimendi manejimendiestate management yekushambadziratarisiro portalneworleansportalmusharenter kushambadzirarenter seo nzirarentersmukurukuri